Akụkọ - Nkọwa zuru ezu banyere akụrụngwa dị oke mkpa maka nnapụta mmiri dị ka ígwè ọrụ mgbanaka mmiri na-achịkwa mmiri, ike ọkụ ndụ, wdg.
Ọdachi ide mmiri bụ otu n’ime ọdachi kachasị njọ na-eme n’ala anyị. Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ, ndị mmadụ nwere ọtụtụ mgbochi. Ọnụ ọgụgụ ụlọ dara ada na ọnwụ n'ihi idei mmiri na mba m n'ozuzu na-adalata. Kemgbe afọ 2011, ọnụọgụ ndị nwụrụ n’ihi idei mmiri n’obodo m erughị otu puku, nke gosikwara na ike ide mmiri akwụsịbeghị.
Na June 22, 2020, obodo mgbago ugwu nke Tongzi County, Zunyi City, Guizhou Province nwetara oke mmiri ozuzo mpaghara. Oke mmiri ozuzo mere n’ime obodo atọ. Oke mmiri ozuzo mere ka obodo dị iche iche dị na Tongzi dị iche iche emetụta ogo dị iche iche. Dika nchoputa mbu na onu ogugu, mmadu 3 gburu ma 1 meruru aru n'ihi ulo nke idei mmiri mere. E zigara ndị mmadụ 10,513 ngwa ngwa ma mmadụ 4,127 chọrọ enyemaka ndụ mberede. Mgbapụ ọkụ na nkwụsịtụ ihe mgbaàmà netwọk na ụfọdụ obodo na obodo kpatara mbibi akụ na ụba kpọmkwem nke yuan 82.89.
Mgbapụta mmiri bụ ọrụ nnapụta nwere mberede na mberede, oge siri ike, ihe dị mkpa nke teknụzụ, nnukwu nsogbu nnapụta, yana nnukwu ihe egwu. Mgbe ndị nnapụta na-abanye n'ime mmiri iji zọpụta ndị mmadụ, ha nọ n'oké ihe ize ndụ ma nwee ike ịhapụ oge kachasị mma iji zọpụta ndị mmadụ. Enweghị ihe ịrịba ama doro anya nke ịdaba na mmiri. Ha na-achọkarị ịchọọ n’ọtụtụ ebe ruo ogologo oge iji chọta onye mmiri na-eri. Ihe ndị a na-abawanye ihe mgbochi iji napụta na mmiri.
Teknụzụ dị ugbu a
Taa, e nwere ọtụtụ ụdị nnapụta mmiri na ahịa, yana ọrụ na-aga n'ihu na oke ọnụ. Agbanyeghị, ọ ka nwere adịghị ike ụfọdụ nke emeribeghị. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime nsogbu nke ngwa ọrụ nnapụta mmiri n'onwe ya:
1. Ngwaọrụ nnapụta mmiri nke atụbara n'ime mmiri site n'ụgbọ mmiri, n'ikpere mmiri, ma ọ bụ ụgbọ elu nwere ike ịmịgharị. Equipmentfọdụ ngwa ọrụ nnapụta mmiri anaghị arụ ọrụ ịgbanye ihu na akpaghị aka, nke na-egbu oge ọrụ nnapụta. Ọzọkwa, ikike iguzogide ifufe na ebili mmiri adịghị mma. Ọ bụrụ na ị zute ife karịrị mita abụọ, a ga-ese foto akụrụngwa na-azọpụta ndụ na mmiri n'okpuru mmiri, nke nwere ike ibute ọnwụ nke ndụ na ihe onwunwe.
2. Mgbe ị na-agbapụta mmiri, ọ ga-abụrịrị na ihe ndị si mba ọzọ dịka osisi mmiri, ihe mkpofu plastik, wdg nwere ike imechi ọnyà ma ọ bụ ngwa nchekwa ndụ. Ndị na-ebu ụfọdụ akụrụngwa anaghị eji mkpuchi mkpuchi pụrụ iche, nke na-enweghị ike igbochi ihe ndị si mba ọzọ ịjikọ na ntutu mmadụ, nke ga-eme ka ihe egwu dị egwu maka ọrụ nnapụta.
3. N'ihe banyere njirimara ya, ihe ndị a na-agbapụta mmiri dị ugbu a nwere nkasi obi na-agbanwe agbanwe, na ikpere na ikpere adịghị eme ka ha sie ike, nke na-eme ka nchebe na wearability na-adịghị ike. Enweghi oke velpa na velcro iji dozie mkpọchi ahụ, nke dị mfe slide mgbe mkpọchi ahụ na-arụ ọrụ n'okpuru mmiri. N'otu oge ahụ, etinyere zipa enweghị akpa mkpọchi, nke siri ike iyi.
Mmiri napụta ime robot
ROV-48 ụgbọ mmiri na-adịghị na nchekwa na ụgbọ mmiri nnapụta bụ obere, na-arụ ọrụ n'ime ime obodo, mmiri na-emighị emi na robot nnapụta maka ọkụ ọkụ. A na-eji ya maka nnapụta mmiri na mmiri, osimiri, osimiri, ụgbọ mmiri, idei mmiri na ọnọdụ ndị ọzọ.
N'ozuzu arụmọrụ kwa
1. Oke kachasị nkwurịta okwu: ≥2500m
2. Oke ọsọ ọsọ: ≥45km / h
Ikuku ime akara ọgụgụ isi ike lifebuoy
Ikuku ikuku na-ejikọ ikike ọgụgụ isi ike ndụ bụ obere robot nnapụta igwe nwere ike rụọ ọrụ nke ọma. Enwere ike iji ya mee ihe na ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, osimiri, osimiri, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, idei mmiri na ọnọdụ ndị ọzọ maka ịzọpụta mmiri.
1. Akụkụ: 101 * 89 * 17cm
2. Ibu: 12Kg
3. Nnapụta ikike ibu ọrụ: 200Kg
4. Ogologo nkwukọrịta kachasị dị 1000m
5. Enweghị ọsọ ọsọ: 6m / s
6. nedgba ọsọ mmadụ: 2m / s
7. Oge ọsọ ọsọ dị ala: 45min
8. Ime akara anya: 1.2Km
9. Oge oru 30min
1. A na-eme shei nke ihe LLDPE na ezigbo nguzogide mkpuchi, mkpuchi eletriki, ike na nguzogide oyi.
2. Nzọpụta ngwa ngwa na njem ahụ dum: Ọ dịghị ọsọ ọsọ: 6m / s; Nwoke (80Kg) ọsọ: 2m / s.
3. Ọ na - anabata ụdịrị ụdịrị egbe, nke enwere ike iji otu aka rụọ ọrụ, dị mfe iji rụọ ọrụ, ma nwee ike ịchịkwa ikike ndụ ike n'ụzọ ziri ezi.
4. Ghọta njikwa ụzọ dịpụrụ adịpụ dị ogologo karịa 1.2Km.
5. Nkwado usoro nhazi GPS, nhazi oge, ngwa ngwa na ọnọdụ ziri ezi.
6. Kwado otu-isi akpaaka-ilaghachi n'ụlọ na akpaaka-laghachi n'ụlọ karịrị nso.
7. Ọ na-akwado ịkwọ ụgbọala ihu abụọ ma nwee ikike ịzọpụta na nnukwu ifufe na ebili mmiri.
8. Ọ na-akwado mgbazi smart nke ntụzịaka ahụ, na ọrụ ahụ ziri ezi.
9. Usoro mgbasa ozi: A na-anabata propepe propela, na radius na-erughị 1 mita.
10. Iji batrị lithium, ntachi obi dị ala karịa 45min.
11. Ike arụmọrụ batrị dị ala.
12. High-penetration mgbaàmà ịdọ aka ná ntị ọkụ nwere ike mfe ịghọta anya n'ọnọdu n'abalị ma ọ bụ na ihe ọjọọ ihu igwe.
13. Zere mmerụ nke abụọ: The n'ihu mgbochi nkukota echebe warara egbochi nkukota mmebi ahụ mmadụ n'oge na-atụ usoro.
14. Mberede: Mbido isi 1, buut ngwa ngwa, dị njikere iji mgbe ị na-adaba na mmiri.